Qaxootiga Ka Soo Laabtay Dhadhaab Oo Sheegay In Ay Heysato Xaalad Bini’aadannimo – Goobjoog News
Faadumo Maadoow Mahad Alle waa guddoomiyaha qaxootiga kasoo laabtay xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya, iyada oo ka hadleysay qaxootiga Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Kenya kasoo laabtay ayey sheegtay in dhibaato faro badan ay kala kulmeen magaalada Mugadisho.
Faaduma waxa ay sheegtay in dhibaatooyinka ay qabaan ay ka mid tahay in aysan helin hoy wanaagsan daryeel caafimaad sidoo kalana ay san helin u badkooda waxbarasho iyo waxyaabaha kale ee nolosha aas-aasiga u ah.
Faaduma waxay hoosta ka xariiqday in qaramada midoobay gaar ahaan hay’adda u qaabilsan qaxootiaga ee UNCHR ay uga baxday ballan ay la galeen, ballankaas oo ahaa in Soomaaliya marka ay tagaan ay wax badan ka faa’idi doonaan.
“Meesha aan joognay waxaan ku heysannay waxbarasho caafimaad waxaan ku heysannay hooy iyo cunto, waan ognahnay in bani’aadanka marka uu meel ka yimaado in uu san wadaheleyn wixii uu heystay “.
Faadumo ayaa ugu dambeyn waxa ay sheegtay in qaar ka mida xaqootigii ka soo laabtay xeryaha dhadhaab ay dib ugu noqdeen Kenya ka dib markii dowladda Soomaaliya ay ka waayeen wax jawaab ah iyada oo sidoo kale hay’adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga adduunka ay sida ay sheegtay uga baxday ballan ay la galeen.
Baydhabo: War Murtiyeed Ka Soo Baxay Shirka Siyaasadda Qaran Ee Dhalinyarada
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida Oo Riddey Xukun Isugu Jira Dil Iyo Xabsi
Qaramada Midoobay iyo Soomaaliya oo iska kaashanaya wax ka qabashada xadgudubyada ka dhanka ah haweenka